A mara nwoke ikpe afọ 5 n'ụlọ mkpọrọ maka ịgbasa COVID na Vietnam
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Vietnam » A mara nwoke ikpe afọ 5 n'ụlọ mkpọrọ maka ịgbasa COVID na Vietnam
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Nwoke Vietnam dị afọ 28 tụrụ mkpọrọ afọ 5 maka njem na ịgbasa nje COVID-19.
Imebi ihe mgbochi COVID-19 na-eduga ogologo oge mkpọrọ.
Nwoke Vietnamese butere mmadụ 8 nwere COVID-19 gara ụlọ mkpọrọ.
Taa, enwere ọnwụ karịrị 13,000 na ikpe COVID-520,000 na Vietnam.
A mara Le Van Tri, 28 ikpe maka "ịgbasa ọrịa na -efe efe dị egwu" ma maa ya ikpe ịga mkpọrọ afọ ise maka imebi mgbochi mgbochi coronavirus siri ike na ịgbasa ndị ọzọ.
Nkwenye na ikpe ngwa ngwa mere n'oge ikpe otu ụbọchị n'ụlọ ikpe ndị mmadụ na mpaghara ndịda Vietnam nke Ca Mau.
Mpempe ikpe ụlọikpe kwuru, "Tri si Ho Chi Minh City lọta Ca Mau… ma mebie ụkpụrụ iche iche ụbọchị iri abụọ na otu."
Ọ gbakwụnyere, "Tri butere mmadụ asatọ, otu n'ime ha nwụrụ n'ihi nje ahụ mgbe otu ọnwa ọgwụgwọ gasịrị,"
A mara mmadụ abụọ ọzọ ikpe na Vietnam ọnwa 18 na afọ abụọ ka ha kwụsịtụrụ mkpọrọ maka otu ebubo ahụ.
Vietnam abụrụla otu akụkọ ihe ịga nke ọma coronavirus ụwa n'ihi nnwale a na -elebara anya, ịchụso kọntaktị siri ike, mgbochi oke ókè, na ichepụ iche. Mana ụyọkọ ọrịa ọhụrụ kemgbe ngwụsị Eprel emebiwo ndekọ ahụ.
Ca Mau, ógbè ndịda ndịda Vietnam, ekwupụtala naanị ikpe 191 na ọnwụ abụọ kemgbe ọrịa malitere, nke dị ala karịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpe 260,000 na ọnwụ 10,685 na mpaghara coronavirus obodo, Ho Chi Minh City.
N'ịbụ nke ụdị Delta na-ebufe nke ukwuu na-ebugharị, ebili mmiri nke anọ nke Vietnam malitere na Eprel 27. N'oge ahụ, ọ bụ naanị mmadụ 35 nwụrụ na COVID-19, ebe ọnụ ọgụgụ ndị na-efe efe na-erughị 4,000. Taa, enwere ọnwụ karịrị 13,000, ebe ọnụọgụ ikpe kachasị 520,000.
Ihe dị ka pasent 80 nke ọnwụ na ọkara ọrịa butere n'ime obodo kachasị ukwuu na mba ahụ Ho Chi Minh City.
Houselọ nde mmadụ itoolu, Ho Chi Minh City anọwo na mkpọchi mkpọchi kemgbe August 23, ebe amachibidoro ndị bi ịhapụ ụlọ ha ọbụna ịzụ ahịa maka nri.
Site na mmachi a ga -adịgide ruo Septemba 15, Prime Minista ọhụrụ Pham Minh Chinh nyere iwu ka a nwalee nnwale maka ndị bi n'obodo ahụ ma tinye ndị agha ka ha mee ka ọnụnọ n'ụlọ dị na nyere aka na nnyefe nri.